တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ (အပိုင်း ၁) - Myanmar Network
Posted by Betty on April 24, 2015 at 11:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Harvard Business Review မှ Tsedal Neeley (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ Harvard Business School) ၏ Global Business Speaks English ဆောင်းပါးအား မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသည့် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် မိမိတို့၏ဝန်ထမ်းများကို အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်စေရန် အထောက်အထား အကိုးအကားများဖြင့် တိုက်တွန်းရေးသားထားသည့် ဤဆောင်းပါးကို Myanmar Network တွင်ဆက်တိုက်ထည့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ CEO များ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ၊ HR ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ဖတ်သင့်ပါသည်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေနေ မဖြစ်နေနေ၊ အင်္ဂလိပ်စာသည် ယခုအခါတွင် စီးပွားရေုးလုပ်ငန်းများ၏ ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကား ဖြစ်နေပါသည်။ ပို၍ပို၍ များပြား လာသော နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကုမ္ပဏီကြီးများသည် အင်္ဂလိပ်စာကို အများသုံး လုပ်ငန်းဘာသာစကားအနေနှင့် သတ်မှတ်တောင်းဆို လာနေကြပြီဖြစ်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ် ဖော်ပြရလျှင် အဲဘတ်(စ်) (Airbus)၊ ဒိုင်မလာခရိုက်စလာ (Daimler-Chrysler) ၊ နော်ကီလာ(Nokia)၊ ရေးနော့(Renault)၊ ဆန်(မ်)ဆောင်း (Samsung)၊ အက်(စ်)အေပီ(SAP) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့ရှိ မိုင်ခရိုဆော့(ဖစ်) (Microsoft) ရုံးခွဲ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပထ၀ီအနေအထား အမျိုးမျိုးကွဲပြားသောနေရာများရှိ လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးစွန့်စား လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ အဆင်ပြေချောမွေ့လာစေရန် ကြိုးစားသောအနေနှင့် ဤသို့ သတ်မှတ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
အများသုံးကြသည့် စကားပြောစနစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်အသုံးပြုခြင်းသည် အတွေးအခေါ် ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ရုံတင်မကပါ။ မဖြစ်မနေလုပ်ရမည့် ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာနိုင်ငံရပ်ခြားတွင် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့အတွက် အာရုံ စူးစိုက်လုပ်ဆောင် နေသည့် ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပင်ဖြစ်စေ မဖြစ်မနေ ဤသို့သတ်မှတ်အသုံးပြုရပါမည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပြင်သစ်ရှိ ရုံးချုပ်မှ အရောင်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးကျင်းပရန် စုဝေး ရောက်ရှိ လာကြသည်ဆိုပါစို့။ ယခု ၎င်းအဖွဲ့ကပင် ပဲရစ်မြို့တွင် အခြေစိုက်သော အခြား ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ ပစ္စည်းအရောင်းသွား ရောက်သည်ဟု စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဤသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံသော နောင်တွင် မိမိတို့နှင့်အတူ မိတ်ဖက်အလုပ်လုပ် လာဖွယ်ရှိသော လုပ်ငန်းရှင်က ပြင်သစ်စကားမပြောသော အခြားနေရာဒေသများမှ ၀န်ထမ်းများကို ခေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ကြိုတင်သဘောမပေါက်ထားပါက အဆင်ပြေ နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဤသို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ပြင်သစ်တွင် အတူတူရှိနေလျှက်နှင့် ထိုပြင်သစ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက ၀န်ထမ်းများသည် အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ်တစ်ခု ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အခန်းတွင်းရှိ လူများတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံမှု မပြုနိုင်၍ ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသည့် အိပ်ရာမှ နိုးထလာစေသော နှိုးခေါ်သံ တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကုမ္ပဏီသည် မကြာမီ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အင်္ဂလိပ်စာအသုံးပြုရေးဗျူဟာကို အသုံးချလာပါ သည်။ အလားတူသော စိုးရိမ်ခြင်းတို့ကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်း အရောင်းဝက်ဗ်ဆိုဒ်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်သည့် ရာကုတန်း (Rakuten) ၏ ဦးဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဟီရိုရှိ မီကိတာနီ (Hiroshi Mikitani) ကို ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ မတ်လ တွင် အင်္ဂလိပ်စာကို ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင်လုပ်ငန်းသုံးဘာသာရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တွန်းပို့ပေး ခဲ့ပါသည်။
ထိုကုမ္ပဏီ၏ဦးတည်ချက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ်တစ် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ရေး ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မီကီတာနီသည် မိမိ၏ ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်း ၇၁,ဝဝ ခန့်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေမည့် ဤပေါ်လစီအသစ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ဦးတည်ချက် ရောက်ရှိအောင်မြင်ရန်အတွက် အလွန်အရေးပါသည်ဟု ယုံကြည် ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ချဲ့ထွင်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်များသည် ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင် စုစည်း တည်ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ရှေးအယူအဆများကို လက်စွဲပြုထားပြီး အယူအဆသစ်များကို လွယ်ကူစွာလက်ခံလေ့မရှိသည့် ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်သော မိမိနိုင်ငံကိုလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာ့အမြင် ရှိလာအောင် ပြုလုပ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟုလည်း ခံစား မိခဲ့ပါသည်။
အမေဇုန်ဒေါ့(ထ်)ကွန် (Amazon.com) နှင့်အီးဘေး (eBay) တို့နှစ်ခုကြားလမ်းဆုံတွင် ရောက်ရှိနေသော ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသည့် ဤကုမ္ပဏီသည် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တိုးတက်ကြီးထွားမှု လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ PriceMinister.com ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Buy.com နှင့် FreeCause၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံရှိ Play.com၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံရှိ Tradoria ၊ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ Kobo eBooks တို့ကို ဝယ်ယူခဲ့သည့်အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်းနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံများမှ အဓိကကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်လည်း ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ထားပါသည်။ ဘာသာစကား ပြောင်းလဲ သုံးစွဲမှုကို ပိုမိုလေးနက်စေရန် မီကီတာနီသည် ဤအစီအစဉ်ကို ဝန်ထမ်းများသို့ ကြေညာရာတွင် ဂျပန်ဘာသာဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ညတွင်းချင်းပင် ကုမ္ပဏီတွင်း ကော်ဖီဆိုင် မီနျူးများသာမက ဓာတ်လှေကားအတွင်း ညွှန်ကြားချက်များပါ ဂျပန်ဘာသာစကား မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသို့ အစားထိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် သူသည် ၀န်ထမ်းများအား နှစ်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အင်္ဂလိပ်စာစစ်ဆေးမှုစနစ် တစ်ခုခုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုပြသရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါက ရာထူး ချခံရလျှင် ချခံရ (သို့) အလုပ်မှ ဖယ်ရှားခြင်းအထိခံရဖွယ်ရှိသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
သတင်းနှင့်မီဒီယာကဏ္ဍ သည် ဤအကြောင်းကို ချက်ခြင်း ကောက်ယူဖော်ပြကြပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလောကသည် အံ့သြတကြီးဖြစ်မှုနှင့်အတူ ရှုတ်ချခြင်းတို့ဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ တာကနိုဘု အိတို က လူအများရှေ့တွင်ပင် “အလုပ်သမားထုက အဓိက ဂျပန်လူမျိုးများသာဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခု တွင် အင်္ဂလိပ်စာကိုသာ အသုံးပြုစေခြင်းသည် မိုက်မဲမှုပင်ဖြစ်သည်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မီကီတာနီသည် ဤသို့သတ်မှတ်မှုသည် မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပြီး၊ ဤပေါ်လစီသည် ရလာဒ်များပြသလာပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကိုသာ သုံးရမည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသည် မီကီတာနီအား အံ့သြလောက်ဖွယ် လူမျိုး ကွဲပြားစုံလင်ပြီး အင်အားတောင့်တင်းလှသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီး ဖန်တီးလာနိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးလိုက်သလို ဖြစ်နေပါသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် သူ၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းထဲမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိခြောက်ယောက်တွင် သုံးယောက်သည် ဂျပန်လူမျိုးများမဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် ဂျပန်စကားတောင် မပြောတတ်ကြပေ။ ကုမ္ပဏီသည် ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းရှိသူများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မရမက ရှာဖွေခဲ့သည်။ ရာကုတန်း(Rakuten) ၏ ဂျပန်ဝန်ထမ်းတစ်ဝက်ခန့်သည် ယခုအခါ ကုမ္ပဏီတွင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လုံလုံလောက်လောက် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး၊ ၂၅%ခန့်သည် လုပ်ငန်းဖော်များ၊ နိုင်ငံခြားရုံးခွဲများရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပုံမှန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကားပေါ်လစီတစ်ခု ချမှတ်သုံးစွဲရန်မှာ မလွယ်ကူပါ။ ကြိုးစားခဲ့သော ကုမ္ပဏီများလည်း သွားရာလမ်းတစ်လျှောက် မလွှဲမရှောင်သာ ခလုတ်တိုက်လဲကျခဲ့သည်များလည်း ရှိပါသည်။ ဤအပြောင်းအလဲ သည် အလွန်အခြေခံကျသော အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သည်။ ၀န်ထမ်းများဆီမှ ပြင်းထန်သော ဆန့်ကျင်မှုနှင့်တွေ့ရမည်မှာ သေချာသလောက် ရှိပါသည်။ များစွာ သောသူတို့သည် သူတို့၏အင်္ဂလိပ်စာက အခြားသူများကဲ့သို့ မကောင်းပါက အားနည်းချက်ရှိနေသကဲ့သို့ ခံစားရမည် ဖြစ်သည်။ အုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ၊ စွမ်းဆောင်မှုများတွင် ထိခိုက်မှုများရှိလာနိုင်သည်။ အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာတို့ပါ ကြားဝင် ပတ်သက်လာနိုင်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာနှင့်ယှဉ်သော စီးပွားရေးအဆင့်တွင် ဆက်လက်ရှင်သန် နိုင်ရန်နှင့် ကြီးထွားတိုးတက်လာစေရန် ကုမ္ပဏီများသည် ဘာသာစကား အတားအဆီးများကို ကျော်လွှားရမည် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အနည်းဆုံး လက်ရှိအနေအထားအနေနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် အမြဲတမ်းနီးပါး အားလုံး အတူတူလာဆုံနိုင်သော ဆုံချက်နေရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားတို့၏သမိုင်းတွင် အမြန်ဆုံးပျံ့နှံ့ခဲ့သောဘာသာစကားဖြစ်သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ၁.၇၅ ဘီလီယံခန့်ရှိသောလူများက အသုံးပြု၍ရသော အဆင့်အနေအထားနှင့် ပြောဆိုသုံးစွဲလျက် ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ လူလေးဦးတွင် တစ်ဦးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်နှင့် သြစတြေးလျကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် ၃၈၅သန်းနီးပါးရှိ မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်သုံးစွဲနေသူများ၊ အိန္ဒိယနှင့် နိုင်ဂျီရီးယားကဲ့သို့သော ယခင်က ကိုလိုနီဇြစ်ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံများတွင် ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုတတ်သူ တစ်ဘီလီယံ ခန့်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် အင်္ဂလိပ်စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအနေနှင့် လေ့လာခဲ့သူများ သန်းနှင့်ချီကာ ရှိနေပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေ ၅၆၅ သန်းခန့်သောလူများကလည်း အင်တာနက်ထဲတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာလို သုံးစွဲလျက်ရှိပါသည်။ မီကီတာနီက “အင်္ဂလိပ်မှုပြုခြင်း (Englishnization)” ဟုခေါ်တွင်သော ဆောင်ရွက်မှု၏ အကျိူးကျေးဇူးများမှာ အရေးကြီး ထင်ရှားလှပါသည်။ သို့သော် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အရေအတွက်အနည်းငယ်မျှသာ ကုမ္ပဏီများကသာ ရလာဒ်များ ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းသုံးရေး ပေါ်လစီကို စနစ်တကျ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်၏ သုတေသနနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့မှတဆင့် ကျွန်ုပ်သည် ကုမ္ပဏီများကို ၎င်းတို့၏ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှုများတွင် လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန် စတင်သတ်မှတ်အသုံးပြုခြင်း (framework) စည်းမျဉ်းဘောင်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လေ့လာရန်များ စွာရှိပါသေးသော်လည်း အောင်မြင်မှုရခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များကလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ စတင်သတ်မှတ်အသုံးပြုသူများအနေနှင့် အရေးကြီး ထင်ရှားလှသော အကျိုးကျေးဇူးများတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုေ...
Permalink Reply by Kyaw Thu on April 26, 2015 at 11:43
It's absolutely true! Inaorganization, two people (Let's say Mr.A and Mr.B) were holding in same position. There wasabig chance for all people in this organization which is going to attendacourse in very well known University in Europe. The selected person will be granted. Each people in this organization were hoping to be selected to go and attend this course. There were tests need to be passed for this chance. Finally, only Mr.A and Mr.B were left for personal interview. The interviewer (a Professor) is from this University and he will be asking interview questions in English. Well Mr.B became to worry about his English skills as he doesn't want to learn English since he was child. But Mr.A is different. Mr.A love to learn English. He used to read English news, short novels and so on. And listening to English songs, podcast and some sort of audio books. It was very obvious for Prof. to chooseasuitable person who is Mr.A. In this experience, we easily can see that why Mr.A is chosen. Two person those holding same position, degree and experience but only thing that make them different is English. This is an example in real life. So please learn English not to suffer this kind of failure in your real life.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on April 27, 2015 at 11:02
Thank you for taking time to write feedback on the post :)
Permalink Reply by Kyaw Thu on April 27, 2015 at 15:44
My pleasure! Btw, myanmar-network.net isagreat website for English learners in Myanmar. Cheers!
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on April 29, 2015 at 16:40
Permalink Reply by Zin Mar Aye on May 20, 2015 at 17:57
Permalink Reply by Winn Thu Aung on June 11, 2015 at 16:04
In that factor of case, i hadaexperience in English Language . Especially, Just speaking for interview. I've been serving to my company asamanager now.but , I am also trying to get more salary and more opportunity during serving . Although it is no more difficult to write and read ,I had any more difficult to speak for interview by mobile phone. I can't understand to listen very well because i had many loose experience in my related field.Otherwise, it was not used to speak at my office.So, i failed my new job for more salary and more opportunity. I am trying to responce for good listening and respeak.
Permalink Reply by Nyunt Nyunt Oo on June 11, 2015 at 20:48